डा. केसीको भेरी अस्पतालमा उपचार, आज काठमाडौं ल्याइँदै - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारसँग सम्बन्धित माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई आज काठमाडौं ल्याइने भएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियु कक्षमा डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रेपछि उनलाई सोमबार नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो ।
अनसनकै क्रमाम उनको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि दुई दिनदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसियू कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । तर त्यहाँ उनले कुनै उपचार गर्न नमानेपछि सोमबार दिउँसो समिट एयरमार्फत नेपालगन्ज ल्याइएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस आज पनि सरकार र केसी पक्षबीच वार्ता, निक्लेला निष्कर्ष ?
१९ औं सत्याग्रहको आठौं दिन सोमबार डा. केसीको नेपालगन्जकै भेरी अस्पतालमा उपचार गरिएको अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रकाश थापाले बताए ।
आठौं दिनमा आएर सोमबार भेरी अस्पतालमा रगत जाँचका लागि डा। केसी राजी भएको डाक्टर प्रविण गिरीले बताए । ‘सबैभन्दा राम्रो कुरा आठौं दिनमा आएर स्वास्थ्य जाँच गर्न राजी हुनुभएको छ’, डाक्टर गिरीले भने, ‘रगत जाँच गरिएको छ, सलाइन पानी दिइरहेका छौं ।’ उनले भोलि बिहानको फलाइटबाट काठमाडौं जाने तयारी भएको सुनाए ।
‘भाइटल राम्रै छ । पल्सको चाल राम्रै छ । तर अपकोर्स लामो समय अनशन बसेकाले स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ, ’ डाक्टर रिसालले भने, थप कुरा अरु रिपोर्ट आएमा भन्न सकिन्छ ।’
ट्याग्स: dr, Dr Govind kc